Bodegas Navarro López - Takagadzirwa kuSpain
Posted On 7 January, 2019 By HB
Mumuguta weValdepeñas, muCiudad Real, vane zana remakore zana Bodegas Navarro López. Kuberekwa sebhizimisi remhuri, iri pamagumo e80 apo inotengwa nemutungamiriri wezvino, kupa ruzivo rwakakura mune mutemo we winery uye kubheta zvikuru pamusoro pehutano uye chete. Mapiyona eDhenomination iripo yeVatendi Valdepeñas, Bodegas Navarro López rinotsigira kuzvipira kwezvino kune yekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza netsika.
Nekuvandudzwa kweVinos de Castilla sechinangwa chayo, ichi chivigiro chiri kusanganisira mazambiringa kubva kune dzimwe nzvimbo nezvimwewo. Zvinokwanisika kuwana mawaini kubva muwaini yewaini iyi Dhidziso Yakatangira Rioja o Ribera del Duero.
Bodegas Navarro López inongwarira iri pedyo nehekeri yeminda yemizambiringa.
Izvi zvinogadzirisa zvakanakisisa kurapwa kwemazambiringa, kuderedza nguva kubva panguva iyo yakabvunzwa kusvikira yakatemwa uye yakasara. Nzvimbo iyo nzvimbo iyo munda wemizambiringa mukuru unokura ndeye DO Valdepeñas, iyo inopa zviputi uye maruva kune mazambiringa anobudisa pachena unhu huri nzvimbo yakasiyana yekurima iyi. Kupfuura mazuva e300 ekupisa kwezuva pagore, kana kukura kwemuzambiringa mune ivhu revhu uye vashomanana vashoma, vanopa chikonzero chekubwinya kwakakodzera kumuzambiringa, nokudaro kuwana zvakagadzirirwa uye zvakanakisa mazambiringa anokosha.
Unhu hwaDon Aurelio wineshesheni idzi dzinowanikwa kunze, izvo zviratidzo zvehutano nemutengo unoshamisa:
Don Aurelio Rosado Ndiyo waini yakakwana yekuendesa dzidzo dzokutanga, miriwo, mupunga, pasta, nezvimwewo. Bhino pink, inobvongodza sitiroki itsva uye marashiro e-raspberry, anopa mukanwa unotapira uye unotapira. Kushumira pakushambidzika kwakakodzera (8 - 10 degrees) iyi waini inomiririra kubwinya kwayo uye kunaka. A inofanirwa mune rosé wines kubva kuSpain.
Don Aurelio Tempranillo Ndiyo yekutanga ye tsvuku dzewaini ye brand. Inoratidzika nokuda kwechimiro chayo chakajeka, icho chinotibvumira kuti tateve mafuta ose emuti uyu unozivikanwa akabatwa muCastilla La Mancha. Izvo zvinyorwa zvezvibereko zvitsvuku uye goroamel yakashambadza zvinomira. Iyo yepiringiri inokurudzirwa kune marudzi ose ezvitsvuku, nyama uye cheeses.
Don Aurelio Crianza ndechimwe cheredzi dzechiratidzo. Inonyanya kuratidza mafuta anogadzirwa nemafuta uye ane caramel anopa miviri ye12 mumapuranga echiFrench echigadziko. Mafuta emuchero mutsva wakabereka, akanaka uye ane chiziviso chine tsvuku mutsvuku. Chisarudzo chakachengeteka kuti chibatanidzwe nezvokudya zvitsvuku, pates uye marudzi ese ezvokudya zvine simba.
Don Aurelio Verdejo ndiyo white wine ye brand. Balsamic uye maruva mavara anowedzera kuendesa kunzvimbo dzinopisa dzinopisa uye michero yakachena. Kunaya kwekushanda kwakanaka kwekushandisa, pakati pe6 uye 8 digrii, kunoita kuti zvive zvakakwana kufambidzana nehove, zvekudya zvegungwa, mupunga uye cheeses idzva. Akaropafadzwa neMidhi Medidhe miviri inotevedzana paFERCAM. Simba rose re Verdejo mazambiringa nekunakidza kweCastilla.
Pasina mubvunzo Bodhagas Navarro López vanoramba vachivandudza gore negore uye zvinokurudzirwa kunyatsoteerera.
Tagged: Bodegas Navarro López/Waini inobva kuValdepeñas/Waini tsvuku/Wines kubva kuSpain
Previous mumhanyi; Hola
Next mumhanyi; Mipini yekupedza dutu guru pachiwi chegwenga naRichard Branson